Askari katirsan Ciidamada AMISOM ee ilaaliya Villa Soomaaliya [Sawir hore]
MUQDISHO, Soomaaliya - Ugu yaraan hal ruux oo shacab ah ayaa ku geeriyooday, qaar kalena way ku dhaawacmay weerar hoobiye oo ka dhacay maanta magaalada Muddisho.
Goob-joogiyaal ayaa Warsidaha Garowe Online u xaqiijiyay in saddex hoobiye ay ku dhacday nawaaxiga Madaxtooyadda Villa Soomaaliya, halkaasi oo ay degan yihiin Madaxda ugu sareysa dalka, sida Madaxweynaha, Ra'iisul Wasaaraha iyo Gudoomiyaha Gollaha Shacabka.
Al Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka, iyadoo intaasi ku dartay in 5 hoobiye ay ku dhaceen gudaha Qasriga Madaxtooyadda, balse ma aysan sheegin khasaaraha ka dhashay.
Qaraxyada madaafiicda ayaa laga maqlay qeybo kamid ah magaalada Muqdisho. Xaafaddo dad shacab ah ay ku nool yihiin oo ku dhaw Madaxtooyada ayay ku dhaceen hoobiyaasha.
Gaadiidka Gurmadka deg deg ah ayaa goobta kasoo qaadey dhowr qof oo soo gaarey dhaawacyo, waxaana la dhigay Isbitaal, sida ay sheegeen Saraakiisha Booliska degmada Wardhigleey, oo ah halka ay Villa Soomaaliya ku taallo.
Dowladda Federaalka, gaar ahaan Madaxda xarunta Madaxtooyada kama aysan hadlin Hoobiyaasha maanta oo laga soo tuurey isla gudaha magaalada Muqdisho.
Madaafiic ku dhacday agagaarka Madaxtooyadda Soomaaliya
Soomaliya 24.07.2019. 15:24
Hoobiyeyaasha oo aan la ogayn bartilmaameedkooda ayaa daryenkooda laga maqlay qaybo kamida caasimada.
Soomaliya 22.03.2018. 22:59